Iindlela ezili-10 zeendaba zezeNtlalontle ezenza ukuba iZabelo kunye nokuGuqulwa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 11, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 13, 2021 Rekha Pant
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, intengiso yemidiya yoluntu ingaphezulu kokungqinelana nezithuba zakho ezikwi-intanethi. Kuya kufuneka uze nomxholo oyilayo kunye nefuthe- into eya kwenza abantu bafune ukuthatha inyathelo. Inokuba ilula njengomntu owabelana ngeposi yakho okanye aqale ngoguquko. Ukuthanda okumbalwa kunye nezimvo azonelanga. Ewe kunjalo, injongo kukuhamba ngentsholongwane kodwa kufuneka kwenziwe ntoni ukufezekisa oko?
Kule nqaku, sinobunzima kumaqhinga eendaba ezentlalo awonyusa izabelo zakho zentlalo kunye noguquko. Senza njani ukuba abantu benze into malunga nezithuba zethu? Yintoni eya kubenza bafune ukwabelana ngeposi? Sidwelisa ezinye zeengcebiso eziluncedo kuwe:
Abantu banotyekelo lwendalo lokunyanzelisa izimvo zabo kwabanye. Ngelixa oko kunokubonakala ngathi kuyacaphukisa, ungakusebenzisa oku ukukunika ithuba kwaye wenze uphando! Amaqonga eendaba ezentlalo anikezela nge-poll okanye inqaku lophando ukuze ulisebenzise. Ungathumela malunga nento elula njengaleyo ilungileyo indawo yeholide, into omele uyisele, okanye ukuba bacinga ukuba kufuneka uzichebe iinwele zakho okanye hayi. Unokusebenzisa oku ukwazi okungakumbi malunga nokukhetha kwabo ngokubuza ngemibala, yeyiphi imisebenzi abanokuyenza, okanye zeziphi iinkonzo abafuna ukuba nazo. Into elungileyo malunga nophando kukuba ziyaphuma njengemibuzo engahleliwe ukuze abantu bangoyiki ukunika iisenti zabo ezimbini.
Bacele ukuba bajoyine iMincintiswano
Uninzi lweeblogi zafumana abalandeli ngokuqalisa imincintiswano. Oku kukonyusa ubukho bakho kwi-Intanethi, kwaye ufumana uguquko ngephanyazo kuba abatyeleli bephepha lakho kufuneka benze into ukuze babe nenxalenye yokhuphiswano. Unokusebenzisa eli thuba ukukhuthaza iphepha lakho kwaye uphucule kungekuphela ukuthanda kunye nezabelo kodwa kunye namaqondo okuguqula.
Qalisa iiSeshoni ze-Q & A
Ukuba ufuna ukwandisa ulwazi lwakho malunga neprofayili yabantu abatyelelayo okanye ngokungakhethiyo uskrole ngaphaya kwezithuba zakho, bamba umbuzo kwaye uphendule iseshoni. Oku kuyasebenza kuba bayayivuma okanye hayi, abantu bayayithanda xa umntu ebuza uluvo lwabo. Isidingo esithile siyazalisekiswa xa umntu ebabuza ukuba bacaciselwe. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuba uqhubeke uqonde abantu abakwinethiwekhi yakho kwaye uze nezicwangciso eziya kuthi zikuncede kwizithuba zakho zekamva.
Ngaba uhambisa le Mifanekiso?
Ngale nto, sithetha, layisha iividiyo. Umfanekiso mkhulu, kodwa asinakukhanyela ukuba ipesenti enkulu yabasebenzisi be-Intanethi banomdla ngakumbi kumxholo wevidiyo. Ngokophando oluqhutywe nguMvavanyi woLuntu lwezeNtlalo sonke siyazi njengoFacebook, abasebenzisi basebenzisa ikhulu lezigidi zeeyure ukubukela iividiyo yinke imihla. Thatha ithuba loku kwaye ukonyuse amaxabiso akho okuguqula ngokulayisha ngaphezulu iividiyo!
Imboleko yeMfanekiso: IBuffer yeNtlalontle
Ukuba uthumela kanye ngeveki ayothusi into yokuba ubukho bakho kwi-Intanethi busezantsi. Eyona nto ibaluleke kakhulu ekufuneka uyigcinile engqondweni yile: ukubandakanyeka kwakho kwimidiya yoluntu kudityaniswe ngokuthe ngqo kumaza ezithuba zakho. Ngoku, amaza axhomekeka kwiqonga leendaba olisebenzisayo. Ukuba nguFacebook, ungathumela ubuncinci kube kanye ngemini kodwa ukuba usebenzisa i-Twitter, kungafuneka uthumele okungenani kube kanye kwiiyure ezimbini ukugcina ubukho bakho kwi-Intanethi.
Ngayo yonke into ihamba ngokukhawuleza, abantu baye baphelelwa ngumonde. Ukutya okukhawulezayo kukhethwa ngokulula kwindawo yokutyela kuba abantu abasazimisele ukulinda ukutya kwabo. Kunjalo ke nangento esiyithumela kwi-intanethi. Ukuba linamagama kakhulu, themba ukuba abantu baya kuskrolela nje ngokudlula kuwo. Ukuyicombulula le nto, uguqule esi sincoko kwi-infographic. Ukubonakaliswa kolwazi ngendlela yeenkcukacha-manani ezahlukeneyo, idatha, okanye uthelekiso kuyonwabisa ngakumbi ngabafundi, yiyo loo nto i-infographic ibalulekile. Ukwenza imizobo, ungalahla izixhobo ezinje Canva kunye nokufumana inkuthazo kwindlela yokwenza i-infographics engabambisi kuphela ingqalelo kodwa ekonyusa nenguquko.
Ukuhleka lelona Gqirha liBalaseleyo
Wonke umntu ufuna ukuhleka maxa onke ukuze ulayishe oopopayi be-GIF okanye iimemes nanini na unako. Unokwenza oku ukuze ufumane uburharha kwiposti yakho. Ngoku, oku ayikokuhlekisa nje abantu; Ikwa malunga nokubonisa abantu ukuba uyangeneka ukuba unento ethile ehlekisayo kuwe. Abantu abahlekisayo bahlala kulula ukubazi. Uya kumangaliswa yindlela izabelo kunye notshintsho oluza kukhawuleza ngayo xa sele ulayishe imeme.
Yenze kube lula kuBantu ukuba babelane ngeZithuba zakho
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo ezenziwa ngabapapashi kukulayisha umxholo kwaye balindele ukuba abantu bafumane apho iqhosha lesabelo likhoyo. Nokuba ukwipulatifomu yemidiya yoluntu okanye iwebhusayithi, qiniseka ukuba amaqhosha akho okwabelana noluntu ayabonakala.
Khawuleza xa uphendula imiyalezo
Qiniseka ukuba uphendula imiyalezo kunye nezimvo kwangoko. Abantu banendawo yokujonga esezantsi kwaye baphulukana nomdla xa umntu ethatha ixesha elide ukuphendula imibuzo yabo. Ngokuphendula imiyalezo ngokukhawuleza, unika umbono wokuba uyasebenza kwi-Intanethi kwaye ungazibonela iimfuno zabo nangaliphi na ixesha. Unako kwakhona ukuvula iimpendulo ezizenzekelayo ukuze ubazise ukuba uwubonile umyalezo wabo kwaye uya kubaphendula kumzuzu wokufumaneka kwakho. Oko kusengcono xa kuthelekiswa "nokubonwa" okuphuma kwibhokisi yemiyalezo kuba oko kuya kubenza bazive ngathi awuzihoyi ngabom.
Soloko Ubonisa Ububele
Cinga ngeakhawunti yemidiya yoluntu oyilandelayo. Kutheni ubalandela nje? Yiba luhlobo lweakhawunti yemidiya yoluntu osoloko ufuna ukufumana uhlaziyo kuyo. Soloko uzibandakanya kwiincoko, kwaye ubaphe abantu obacaphulayo kuba oku kuya kubenza bazive ukuba uyabaxabisa kwaye uyabahlonipha. Beka i-premium ekudalweni komxholo, kwaye uphakamise abanye ngakumbi ukuba ucinga ukuba umsebenzi wabo yinto abalandeli bakho abaya kuyithanda. Yiba nesisa ngokwabelana ngamabali, ukuqonda, ulwazi, izinto ezinokubaluleka kubalandeli bakho. Xa ungoyiki ukukhuthaza abanye, abalandeli bakho bayakuziva oku kwaye baya kubenza bafune ukwabelana ngezithuba zakho nangakumbi.
Ukwazisa: Martech ZoneUnxibelelwano lokudibana Canva isetyenziswe kweli nqaku.
tags: ukwandisa izabelobufferliphikisaezihlekisayoimifanekisoyandisa utshintshobubeleAmanani entengisoUbungakanani beposiq & iiseshoniumbuzo nempenduloukwabelanaimifanekiso yemidiya yoluntuimpendulo kwimidiya yoluntuUkwabelana ngemidiya yoluntuZophando
URekha Pant, yingcali ye-IT, B. Tech evela kwiYunivesithi yaseRGPV, eBhopal, eIndiya. Kunye nomsebenzi wakhe we-IT, uye waziguqula ukuba abe ngumbhali ngokutyibilikayo egubungela izihloko ezahlukeneyo kuNxibelelwano lweDijithali, ezeMfundo, ukuThengisa kunye ne-IT. Ngetalente yakhe enqabileyo, upapashe iziqwenga zeblogi njengendwendwe kwiiwebhusayithi ezininzi.